Bata nesu-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Pinda Mukubatana Nesu
Ndokumbira utizivise kana iwe uine mubvunzo unoda kusiya mhinduro
Luojiang Industrial Zone, Hemudu Town, Yuyao Ningbo Guta, China
Mr. Shu vanosimbirira, zvidiki diki senge munhu anofarira show, anogona kutaura chimwe chinhu nezvavo. Iye ane hudzamu maniac, haangobhadhare isinganzwisisike kumidziyo yemidziyo asiwo anopenga nezve zvinonaka zvebheri.
Anopfuura makore makumi matatu ezviitiko mumunda wedhiraini yezvigadzirwa, nguva dzose achitarisa nzira dzekuita kuti masisitimu edu ashande zvakanyanya. CADA mukuru wedoro taster.
Kugadzira & QC maneja
Anopfuura makore gumi nemanomwe emutungamiri wechikwata mukugadzira chinwiwa chinwiwa, anonyatsoziva zvese zvikamu zvekubika zvivakwa. Kushushikana nezve zvigadzirwa zvedu sezvauri nezve ako mabhureki.
R & D Injiniya
Nyeredzi nyowani mumunda wekubika bheriya, 5-makore nyanzvi mu3dhi dhizaini, vanoda imba yekubika, uye vane ziso rakatenderedza kwazvino indasitiri maitiro.
Wakafa-wakaoma doro mudiwa, gumi-makore ruzivo mune zvese zviri zviviri kupinza uye kutumira bhizinesi, ruzivo rwakanaka rweyambuko-tsika kutaurirana. Kugadziridza gadziriso gadziriso uyo anofumura nekugadzirisa zvinhu zvakaomarara kuona kuti vatengi vanogamuchira mwero wepamusoro webasa nekutarisirwa.
Makore gumi nemashanu emidziyo yekumaindasitiri yekutengesa ruzivo kusanganisira makore mashanu ekuburitsa ruzivo mukuchera machineries.
Kushingairira kwechokwadi uye pfungwa yakasimba yebasa kwauri kuti uunze masevhisi ekutengesa emhando yepamusoro.Ukugona kweruzivo rwehunyanzvi kuchandiita kuti ndiwedzere kuva nechivimbo chekupa indasitiri rubatsiro kune vazhinji vatengi